ढोरपाटन महोत्सव : आज देखी भलिबल प्रतियोगिता सुरु, पहिलो खेलमा सनराईज युवाक्लब विजयी ! – ebaglung.com
ढोरपाटन महोत्सव : आज देखी भलिबल प्रतियोगिता सुरु, पहिलो खेलमा सनराईज युवाक्लब विजयी !
२०७५ बैशाख ४, मंगलवार १४:५४	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
झरना कँडेल, बुर्तिवाङ २०७५ बैशाख ४ । ढोरपाटन महोत्षवको आज चौथो दिन भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । ८ समुहको सहभागिता रहेको भलिबल प्रतियोगिता खेलको आज ढोरपाटन नगरपालीकाका नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले खेल संयोजक गोकुल शेरचनलाई भलिबल हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गरेका हुन ।
आज पहिलो चरणमा सनराईज युवा क्लव निसीखोला गाउँपालिका २ जुग्जाखोला र तमानखोला गाउँपालिका बिच भएको खेलमा , सनराईज युवा क्लव निसीखोला गाउँपालीका २ जुग्जाखोला अघिल्लो चरणमा प्रबेश गरेको छ । केही बेरमा पञ्चासे युवा क्लव निसीखोला गाउँपालिका ७ राजकुत र ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ३ बिच खेल हुने खेल संयोजक गोकुल शेरचनले जानाकारी दिए छ ।
खुल्ला पुरुष भलिबल खेलमा प्रथम हुनेले ,रु १ लाख १ हजार १ सय ११ , व्दितीय हुनेले रु ७० हजार ७ सय ७७ र तृतिय हुनेले रु ३० हजार ३ सय ३३ प्रप्त गर्नेछन् भने खुल्ला महिला भलीवलको प्रथम हुनेले ४४ हजार , ४ सय ४४ , द्धितिय हुनेले रु . २५ हजार ५ सय ५५ र तिृतीय हुनेले ३० हजार ३ सय ३३ प्रप्त गर्नेछन् ।
आज अन्य विविध कार्यक्रम सहित खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगीत खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगीता , ४ नं प्रदेश स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता , ताराखेल प्रतियोगीता ,सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
आज बिहानैदेखी हेलिकप्टर मार्फत बुर्तिबाङ क्षेत्र तथा पर्यटकीय ढोरपाटन क्षेत्रको अवलोकन गरीरहेका छन् । उता गायिका सहिमा श्रेष्ठ , शिव हमाल, जनगायक जीवन शर्मा , र राजेन्द्र बजगाई लगायत अन्य राष्ट्रीय तथा स्थानीय कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने आयोकले जनाएको छ ।
स्मरणीयछ, हिँजो महोत्सवको तेस्रो दिन बिभिन्न संघ संस्था तथा ब्यापारी समुह बिच मैत्रीपुर्ण भलिबल खेल सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगितामा ३ समुहको सहभागिता रहेको थियो । जसमा संयुक्त ब्यापारी समुह ढोरपाटन नगरपालीका १ प्रथम भएको छ । प्रथम हुनेले ३० केजीको खसी प्राप्त गर्नेछन ।
यस्तो रह्यो, चर्चित गायक पँगेनीको साँगीतिक प्रस्तुति, पहिले रुवाए त्यसपछी हँसाए र सबैलाई नचाए
बरेङमा गाउपालिकास्तरीय भलिबल खेलाडी छनौट कार्यक्रमको उद्घाटन !